बजार::Nepal's Online News Portal
एक्कसी फेरी बढ्यो सुन र चाँदीको मूल्यमा यतिमा किन बेच हुदै- पढ्नुहोस
बिहिबार सुनको मूल्य प्रतितोला ३ सय रुपैयाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार अघिल्लो दिन प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन ३ सयले बढेर ५९ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। यो फाइन...
फास्ट इन्टरनेट भन्दै ग्राहकलाई सेवा दिदै आएको क्लासिकटेकको इन्टरनेटमा बिगत लामो समय देखि समस्या देखा पर्दै आएको छ।ग्राहकको समस्या सुन्नको लागि राखिएको टेलिफोनमा सम्पर्क गर्दा घन्टौ सम्म होल्डमा राखिदिने र काटिदिने समस्याले गर्दा ग्राहक...
फेरी बढ्यो सुनचाँदीको भाउ यस्तो छ नेपाली बजारमा- पढ्नुहोस
काठमाडौं, २९ चैत्र । बिहीबार पनि सुनको भाउ बढेको छ । बिहीबार तोलामा ५ सय रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ बिहीबार फेरि बढेको हो । बिहीबार पनि सुनको भाउ ५ सय रुपैयाँले बढेर तोलाको ५८ हजार...
एकै दिन घट्यो सुनको भाउ यति धेरै
आज बुधबार सुनको मूल्य प्रति तोला ५ सय रुपैयाँका दरले बढेको छ । आज सुन प्रतितोला ५८ हजार ४०० रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ । मंगलबार सुनको भाउ प्रतितोला ५७ हजार ९०० रुपैयाँ कायम भएको थियो...
सहकारी सम्बन्धि शिक्षाको लागि गर्यो शैलुङ्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सदस्यहरुलाई सहकारी तालिम
चौरीदेउराली ०३ काभ्रे, माझीफेदा मा रहेको शैलुङ्गेश्वरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आफ्नो शेयर सदस्यहरुलाई सहकारी शिक्षा प्रदान गर्ने उद्धेश्यले २०७४ चैत्र २४ गते शनिबारको दिन काठमाण्डौ ४ धुम्बाराही स्थित धुम्रबराह पार्टी प्यालेसमा...
एकाएक आज मात्रै एति धेरै सुनको मूल्य घट्यो,नेपालमा अब पाइने भयो सस्तोमा सुन
चैत २२, काठमाडौं । हिजो तोलामा २०० रुपैँयाले घटेको सुनको भाउ आज पनि घटेको छ । आज पनि सुन तोलामा २०० रुपैयाँले नै घटेको छ ।त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि ५ रुपैँयाले घटेको छ...
आज पनि घट्यो सुनको भाउ यति पुग्यो बजार मूल्य- पढ्नुहोस
चैत २१, काठमाडौं । निरन्तर घटबढ भइरहेको सुनको भाउ आज भने घटेको छ । आज सुन तोलामा २०० रुपैयाँले घटेको छ ।त्यस्तै आज चाँदीको भाउ पनि ५ रुपैँयाले घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको...
आयो नेपालमै विश्वकै सबै भन्दा सानो ल्यापटप त्यो पनि यति सस्तोमा !
ताइवानको एलाइट ग्रुप कम्प्युटर सिस्टम्स (इसीएस) ले संसारको सबैभन्दा सानो विन्डोजमा आधारित मिनी पीसी ‘लिभा क्यू’ भारतको बजारमा ल्याएको छ । भारतमा यसको मूल्य करबाहेक १५ हजार ५ सय भारु पर्नेछ । यो पीसी आधुनिक इन्टेल...
सेयर बजारको परिसूचक नेप्से २ वर्षअघिको विन्दुमा
सेयर बजारको परिसूचक नेप्से २ वर्षअघिको विन्दुमा झरेको छ। २४ अंकले नेप्से झरेर १२ सय ३१ अंकमा कायम भएको छ। यो अंक २०७२ साल माघ १७ गतेयताकै न्यून हो। सो दिन १२ सय २० मा...
एक्कासि बढ्यो सुनको मूल्य ? कति छ – पढ्नुहोस
काठमाडौं– मंगलबार सुनको मूल्य २ सय रुपैयाँले बढेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सोमबार फाइन सुन तोलामा ५७ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएकोमा आज मंगलबार तोलाको ५७ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार...